मौलापुरकी मेयर साह सफल : ८५ प्रतिशत बजेट खर्च - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home अर्थ मौलापुरकी मेयर साह सफल : ८५ प्रतिशत बजेट खर्च
मौलापुरकी मेयर साह सफल : ८५ प्रतिशत बजेट खर्च
गौर । रौतहटको मौलापुर नगरपालिलाकी प्रमुख रीनाकुमारी साहले अब्बल नेतृत्वको उदाहरण दिएकी छिन् ।
प्रदेश नम्बर २ मै एक मात्र महिला स्थानीय तह प्रमुख रहेकी उनको नेतृत्वमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गराएकी छिन् । कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मौलापुर नगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । जुन जिल्लाको १८ स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा बढी छ ।
नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको चालू खर्चतर्फको ९६.६३ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्चतर्फको ७९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालू खर्चतर्फको ६८.८८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्चतर्फको ७४.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समग्रमा चालुतर्फ ९३.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७.०१ प्रतिशत गरी कुल ८५.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस वैदेशिक मुद्रा भण्डारण हालसम्मकै उच्च
नगरप्रमुख साहले चुनाव जितेलगत्तै पुरुषभन्दा बढी काम गरेर देखाउने बताएकी थिइन् । अहिले उनको नेतृत्वले उक्त भनाई पुष्टि हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । एकातिर महिलाले उचित स्थान नपाईरहेको बेला महिला मेयरको नेतृत्वमा मौलापुर नगरपालिकाले अग्रभाग हासिल गरिरहेकोप्रति महिलाहरुले गर्व गर्ने स्थिती रहेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउछन् ।
यो बजेट खर्चको स्थिति मात्र नभई यस नगरपालिकाले दलित भवन निर्माण, किसानलाई निशुल्क सिंचाई र बीउ, सहुलियत मलखाद, मालपोत कर माफ लगायतको प्रगतिशील काम गरेको छ ।
प्रशान्त वली - October 6, 2020
प्रदेश रासस - May 16, 2020
लण्डन । कोरोनाबाट बेलायतमा ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या ६३ पुगेको छ । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरणले शुक्रबार यो जानकारी दिएका हुन् ।...
प्रदेश २ आलोक यादव - April 21, 2020
सिरहा । कोरोना भाईरसको संभावित संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको बेला सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका बाट सिरहा प्रहरी ले लागू-औषध सहित...
Exclusive हेमन्त केसी/रासस - March 2, 2020
जाजरकोट । ‘बाबा म अहिले गर्भमा हुर्किरहेको छु, हजुरले आमालाई पोसिलो खाने कुरा उपलब्ध गराउनुहोला ? आमाले सो खाएमा म र आमाको स्वास्थ्य राम्रो...
Not-to-be-missed (रासस) - February 24, 2020
काठमाडौँ । कतारले नेपालसँगको श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्न तयार रहेको जनाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग...
आदर्श सहकारीको प्राथमिकतामा सदस्यको स्वास्थ्य सुरक्षा
प्रदेश ४ नवीन शिशिर - July 12, 2020
बागलुङ । आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले सेयर सदस्यको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गरेको छ । संसथाको वार्षिक समिक्षा तथा योजना...
यो पनि पढ्नुहोस ‘नीजि क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड’
राजेन्द्रप्रसाद पनेरु - December 4, 2020
यो पनि पढ्नुहोस विदेशमा दुःख, स्वदेशमा ढुक्क